Real Madrid oo rikoor cusub u dhigi doonta koobka UCL haddii ay caawa guul ka gaarto kooxda APOEL Nicosia | Ciyaarside.com
Real Madrid oo rikoor cusub u dhigi doonta koobka UCL haddii ay caawa guul ka gaarto kooxda APOEL Nicosia
Nov 21, 2017 - Aragtiyood
Real Madrid ayaa caawa oo Talaado ah wajaheysa kooxda APOEL Nicosia kulan ka tirsan Guruubka H ee tartanka UEFA Champions League – haddii ay badiso ciyaartaan Los Blancos ayaa noqon doonta kooxdii ugu horreysay ee 100 guul ka gaarta koobka Champions League.
Kooxda Zinedine Zidane ayaa markeedii seddaxaad isku deyeysa inay gaarto rikoorkaan iyadoo ka hor imaaneysa APOEL Nicosia, waxaana xusid mudan inay ku guuldarreysatay inay gaarto rikoorkaan labadii ciyaar ee xiriirka ahaa ee ay koobka UCL ku wajahday Tottenham Hotspur.
Xaqiiqadu waxay tahay Barcelona ayaan cadaadiska ku adkeyn Real Madrid maadaama ay soo qaban kartay, Barcelona haatan 98 guul ayey ka gaartay tartanka UCL tan iyo markii magacaan loo bixiyey waxaana ciyaartoodii ugu dambeysay barabardhac ku qabatay kooxda Olympiacos – halka Los Blancos ay ka gaartay 99 guul.
Si kastaba ha ahaatee, marka istaatistikada guud laga hadlo, Real Madrid ayaa ka wanaagsan Barcelona, maadaama ay Real Madrid 360 gool ka dhalisay koobkaan, marka loo fiirsho Barcelona oo ka dhalisay 337 gool, sidoo kale Los Blancos ayaa 325 dhibcood ka shaqeysatay koobkaan, marka loo fiirsho Catalans oo 315 dhibcood ka shaqeysatay.
Guulaha boqolleyda ah, Real Madrid ayaa ku badan iyadoo badisay boqolkiiba 64.3 kulamadeedii koobka Champions League, halka Barcelona ay adkaatay boqolkiiba 63.64 kulamadeedii tartankaan.
Liiska 10ka kooxood ee boqolleey ahaan ugu guulaha badan Koobka Kooxaha Yurub waxaa dhammeystiraya Paris Saint-Germain, Chelsea, Bayern Munich iyo Manchester United. Sidoo kale labada kooxood ee reer Spain Sevilla (57.1%) iyo Atletico Madrid (54.3%) ayaa kasoo muuqday liiskaan.
Waxayna ka sarreeyaan Inter, Juventus iyo Arsenal oo boqolkiiba 50 adkaatay ciyaarahoodii koobka UCL tan iyo markii magacaan loogu wanqalay.